Kusetshenziswa Amafomu e-WordPress Namandla Okuthwebula Ukuhola | Martech Zone
Ukusetshenziswa WordPress njengoba uhlelo lwakho lokuphathwa kokuqukethwe lujwayelekile kakhulu kulezi zinsuku. Amaningi ala masayithi mahle kepha awanalo isu lokuthwebula umkhondo wokumaketha ongenayo. Izinkampani zishicilela amaphepha amhlophe, ucwaningo lwezifundo, futhi zisebenzise amacala ngokuningiliziwe ngaphandle kokuthwebula imininingwane yokuxhumana yabantu abayilayishayo.
Ukwakha iwebhusayithi enokulanda okungatholakala ngamafomu okubhalisa kuyisu elihle lokumaketha elingena ngaphakathi. Ngokuthwebula imininingwane yokuxhumana noma mhlawumbe nokungena kokuxhumana okuqhubekayo kwe-imeyili - wazisa umsebenzisi ukuthi angathintwa naye ukuthola imininingwane yakhe yokuxhumana.
Uma ungasebenzisi i-WordPress, ufuna ukusebenzisa amafomu kuzingxenyekazi eziningi noma izindawo eziningi, noma unezidingo ezisezingeni eliphakeme kakhulu, isincomo sami sihlala sikhona I-Formstack. Kulula ukuyisebenzisa, ukusetha, nokushumeka ngaphandle kwesayithi lakho. Uma usebenzisa i-WordPress, Gravity Amafomu yenze i-plugin ethandwa kakhulu esebenza kahle ekubambeni idatha.
Amafomu eGravity iyi-plugin engakholeki yokudonsa nokwehlisa ifomu eyenzelwe i-WordPress. Ithuthukiswe kahle, inethoni lezengezo nokuhlanganiswa, futhi - okuhle kunakho konke - igcina konke ukuthunyelwa ngaphakathi kweWordPress. Amathuluzi amaningi amanye amafomu laphaya avele acindezele idatha ekhelini le-imeyili noma kusayithi langaphandle. Uma kunenkinga ngokudluliswa kwaleyo datha, awunalo noma yiluphi uhlobo lwesipele.
Izici Zamafomu Okudonsela phansi Faka
Kulula Ukuyisebenzisa, Amafomu Anamandla - Yakha ngokushesha futhi wakhe amafomu akho we-WordPress usebenzisa umhleli wefomu elibukwayo elinembile. Khetha izinkambu zakho, lungiselela izinketho zakho, namafomu okushumeka kalula kusayithi lakho elinikwe amandla nge-WordPress usebenzisa amathuluzi akhelwe ngaphakathi.
30+ Ukulungele Ukusebenzisa Izinkambu Zefomu - Amafomu eGravity aletha okokufaka kwensimu okuhlukahlukene ezandleni zakho futhi usithembe, iminwe yakho izokubonga. Khetha bese ukhetha ukuthi yiziphi izinkambu ofuna ukuzisebenzisa usebenzisa umhleli wefomu okulula ukuyisebenzisa.
Logic Yemibandela - I-Logic enemibandela ikuvumela ukuthi ulungiselele ifomu lakho ukukhombisa noma ukufihla izinkambu, izigaba, amakhasi, noma inkinobho yokuhambisa ngokususelwa kokukhethiwe komsebenzisi. Lokhu kukuvumela ukuthi ulawule kalula ukuthi yiluphi ulwazi umsebenzisi wakho acelwa ukuthi alunikeze kusayithi lakho elinikwe amandla nge-WordPress futhi uvumelanise ifomu ngqo nezidingo zabo.
Izaziso ze-imeyili - Uzama ukugcina phezulu kwakho konke ukuhola okukhiqizwe kusuka kusayithi lakho? Amafomu eGravity anezimpendulo ze-imeyili ezizokugcina wazi njalo uma kufakwa ifomu.
Ukulayishwa Kwefayela - Udinga ukuthi abasebenzisi bakho bahambise amadokhumenti? Izithombe? Kulula lokho. Vele ungeze izinkambu zokulayisha ifayela kwifomu lakho bese ugcine amafayela kuseva yakho.
Gcina bese uqhubeke - Ngakho-ke udale ifomu elibanzi futhi kungathatha isikhashana ukuqedela. Ngamafomu eGravity, ungavumela abasebenzisi bakho ukuthi balondoloze ifomu eligcwaliswe kancane bese bebuya emuva kwesikhathi ukuze baliqedele.
Izibalo - Amafomu eGravity akuyona i-plugin yakho yansuku zonke yefomu… iyi-wiz yezibalo nayo. Yenza izibalo ezithuthukile ngokuya ngamanani enkambu afakiwe futhi umangaze abangane bakho.
Ukuhlanganiswa - I-Mailchimp, i-PayPal, i-Stripe, i-Highrise, i-Freshbooks, i-Dropbox, i-Zapier nokunye okuningi! Hlanganisa amafomu akho nezinhlobonhlobo zezinsizakalo nezinhlelo zokusebenza.
Gravity Amafomu kufanele kuyo yonke indawo ye-WordPress. Sobabili singabanikazi futhi sinelayisense yokuthuthukisa impilo yonke!
Landa amafomu eGravity
Tags: bamba imikhondoamafomuamafomu adonsela phansimarketing kwangaphakathiXhumaWordPressamafomu we-wordpressplugin wordpress
Yakha isiqondisi esiku-inthanethi seWordPress ngeGravityView
I-Oct 11, i-2009 ku-5: i-19 PM
Ividiyo esiza kakhulu, uDouglas. Gcina lezo zinto ziza.
I-Oct 26, i-2009 ku-7: i-46 PM
I-Nice tut, elula futhi isizile le newbie yeGravityForms ukuthola ifomu lami lokuqala futhi lisebenze. http://bit.ly/4ANvzN
Ngabe uyasithanda isamba esinqunyelwe? Kubukeka sengathi kungeza izinga "lokudideka" (okusho izinkinobho eziningi) kwabanye abafundi… futhi kunzima ngokwanele ukuthola ukuphawula kwakho!
Aug 22, 2011 ngo-7: 24 PM
Amafomu eGravity ne-WordPress kuyinhlanganisela enhle. Ngabe uneziphakamiso zokufihla i-URL yangempela kufayela lokulanda nokwethula i-URL ehlukile yokulanda engasetshenziswa kanye kuphela? Ingabe into efana ne-bit.ly ingasetshenziselwa ukudala isixhumanisi sokulanda sesikhathi esisodwa? Ngicabanga ukusetshenziswa kokulanda izingoma ezithengiwe noma amanye amafayela ofuna ukuvikelwa kuwo?
Aug 22, 2011 ngo-7: 51 PM
Angiyifihli i-URL yangempela - ngifaka isixhumanisi ku-imeyili yokuphendula ngakho-ke kudinga ukuthi babe nekheli le-imeyili elivumelekile. Ngiyaqiniseka, ngekhodi ethile encane, ungabanikeza isixhumanisi nge-hash okuyikheli le-imeyili elibethelwe - uma-ke bengalichofoza, ungabona ukuthi ngabe lilandwe kanye futhi bese umisa omunye umuntu ukulilanda.
Aug 22, 2011 ngo-8: 10 PM
Ukuyibhekela ukuthi ilandwe futhi kususwe noma kushintshwe isixhumanisi ngeke kusebenze kahle. Ukwazi ukusebenzisa uhlobo olufushanisa i-URL lwethuluzi ukukhiqiza ngokushesha nokuxhumanisa obfuscated futhi wabelane nomsebenzisi ozosebenza inombolo echazwe ngaphambilini yezikhathi kungaba ukwengeza okuhle kakhulu.
Aug 22, 2011 ngo-8: 37 PM
Usho khona kanye engisanda kukwenza. Leyo yingxenye 'enekhodi ethile encane'.
Ngo-Apr 30, i-2013 ku-7: 14 AM
engeza umphathi wefayela bese udala izindawo ezilula zokulanda - ama-url awasekho
May 10, 2015 ku-12: 13 AM
Ngabe akekho osebenzisa amafomu adonsela phansi + ukuhlanganiswa kwemfene kwe-chimp nebhokisi le-popup / popover elifana ne-drip ukuze lithathe amakheli e-imeyili ezincwadi zezindaba? Ngibonile ukuthi leli sayithi empeleni lisebenzisa i-drip futhi belifuna indlela yokuba nokubukeka okufana nokudonsa ngaphandle kwezindleko.
May 11, 2015 ku-3: 48 PM
Sisebenzisa amafomu eGravity futhi sisebenzise iMailchimp kepha asikakuboni okudingayo. Ngiyavuma - kungakuhle kakhulu ukuba nethuluzi elilula lelo! OptinMonster akukubi kakhulu futhi kungalungiswa kakhulu.